Madaxweynaha dalka oo tilmaamay himilada dowladiisa in ay tahay gaarsiinta nabada gobol walba – Radio Daljir
Nofeembar 6, 2013 4:48 b 0
Muqdisho, November 6, 2013 – Madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan sheikh maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisa ay dar-dar gelinayso qorshaha u degan ee xasiloonida iyo nabad ku soo celinta dalka Soomaaliya, waxaa uu sheegay in mustaqbalka wadanka uu ku jiro gacanta dadka.
Madaxweyne Xasan sheikh oo ka hadlayey casho sharaf uu u sameeyey ergada shirka dib-u-heshiisiinta Jubbooyinka xalay waxaa uu ku sheegay himilada dowladiisa, ?qorshaheenna wuxuu yahay in aan meel kasta oo Soomaaliya ka mid ah gaarsiino maamulka si nabad loogu soo dabbaalo.?
?Ninka shalay ku mashquulsan waxaa dhaafaysa maanta iyo beri, ergada jubbooyinka iyo madaxda maamulka Jubba waxaan kula dar-daarmayaa gacmaha is qabsada oo ka shaqeeya nabada iyo wada noolaanshaha.? Ayuu madaxweyne Xasan sheikh maxamuud.
Madaxweyne xasan sheikh maxamuud waxaa uu rajo ka muujiyey natiijada ka soo baxaysa shirka dib-u-heshiisiinta Jubbooyinka ee Muqdisho maanta lagu soo xirayo.
Ugu dambayntii madaxweynaha dalka ayaa boggaadiyey maamulka KMG ah ee Jubba, iyo ergooyinka kala duwan ee ka qayb-galaya shirka Muqdisho ka socda, isagoo ku tilmaamay in ay yihiin xubno u halgalamaya nabad ka dhalata Jubbooyinka iyo Gedo.